विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिट–१९) को कारण पर्यटक आगमन ठप्प भएसँगै हजारौ संख्याका टूरगाइड बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोरोनाले पर्यटनमा पारेको प्रभाव, टूरगाईडहरुको समस्या र सरकारसँगको मागबारे टुरिष्ट गाईड एसोसिएसन अफ नेपाल (टूगार्न) का अध्यक्ष केदार तामाङ्गलाई गन्तव्य नेपालको ५ प्रश्न ः
१) कोरोनाले टूरगाईडहरुलाई कस्तो समस्या सृजना गरेको छ ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा पर्यटक आगमन ठप्प छ । पर्यटक आगमन नै ठप्प भएपछि टूरगाईहरु कामबिहीन हुने नै भइहाल्य । विगत ५ महिना यता हामी टूरगाईडहरु कामबिहीन छौं । त्यसले गर्दा टूरगाईड र आश्रित परिवारको जीवन निकै कठिन मोडमा पुगेको छ । त्यसलाई सहज बनाउन हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ९ बुँदे माग पत्र पेश गरिसकेका छौं ।
२) तपाईहरुका माग के–के हुन ?
मैले अघि नै भने हामीले ९ बुँदे माग पत्र पेश गरेका छौं । त्यसमा कोरोनाले टूरगाईडहरु बेरोजगार बन्नु परिरहेको अवस्थामा सरकारले यसअघि घोषणा गरे अनुरुप विभिन्न क्षेत्र एवं आयोजनाहरुमा (टूरगाइडको शिक्षा,क्षमता र दक्षता अनुसार) अन्तरिम रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, टूर्गानको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त टूरगाईडलाई बिना धितो न्यूनतम ब्याजदर (बढीमा ५ प्रतिशत) मा ५ वर्षको लागि न्यूनतम रु १० लाख रुपैयाँ कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महामारीका कारण हाल भएका टूरगाईड समेत बेरोजगार हुनुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन वर्षसम्म नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)ले सञ्चालन गर्ने नयाँ टुर गाईड तालिम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, टूरगाईडहरुको न्यूनतम १५ लाख सम्मको बीमा र हाल नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश टूरगाईड फ्रिलान्सर रहेको र उहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने बाटोमा अझै पनि अस्पष्टता र अन्यौलता कायमै रहेकोमा यसबारे थप स्पष्टता सहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत छन् ।
३) सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको पाउनुभयो ?
कोरोनाले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र मध्ये पर्यटन एक हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ नीति तथा कार्यक्रम पर्यटन व्यवसायी र श्रमिकहरुलाई उत्साहित बनाउने खालको आएन । हामीले जुन किसिमको राहतको अपेक्षा गरेका थियौ । त्यस्तो भएन । सरकारलाई हाम्रा पिर मर्का सहितको माग पत्र बुझाएका छौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि क्षतिको अध्ययन गरि पर्यटन क्षेत्रलाई बचाई राख्न के कस्ता उपायाहरु अबलम्वन गर्न सकिन्छ सो को सुझाव सहितको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तर तयसलाई खासै ध्यान दिएजस्तो लागेन । तर आशावादी छौं, यही जेठ १५ गते आउने आगामी बजेटले हाम्रो मागहरुलाई उचित सम्बोधन गर्ने छ ।
४) कोरोनाको यो संकटले टूरगाईडहरु अझै केही वर्ष बेरोजगार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । यो अवस्थामा उनीहरु पलायन हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
कोरोनाको महामारी तत्काल अन्तः हुने सम्भावना छैन । त्यसले गर्दा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि मानिसहरु पहिलेको जस्तो तत्कालै भ्रमणमा निष्कन सक्ने अवस्था हँुदैन । अर्को तर्फ विश्वभरकै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चौपट छ । त्यसले मानिसलाई आर्थिक क्षती पु¥याएको छ । यसले पनि भ्रमणमा निष्कन पक्कै पनि केही असहज बनाउछ ।
विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरुले देखाएको छ, नेपालको पर्यटन क्षेत्र विगतकै अवस्थामा फर्कन २, ३ वर्ष लाग्ने छ । त्यसो हुँदा राज्यले त्यो अवधीसम्म टूरगाईडहरुको जिवनलाई सहज बनाउन विशेष ध्यान नदिने हो भने उनीहरु पलायन हुने सम्भावना निकै रहन्छ । पलायन विभिन्न किसिमले होला, केही देश छोडेर जालान वा कोही अन्य व्यापार, व्यवसायमा लाग्लान । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर पलायन हुने अवस्थामा बन्यो भने देशको लागि निकै घाटा हुन्छ । विश्वभर नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरि पर्यटन प्रर्वद्धनमा टूरगाईडहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसलाई कसैले नर्कान सक्दैन । त्यसो हुँदा पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले हाम्रा मागलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
५) अन्तमा ?
मैले अघि पनि भने नेपालको पर्यटन विकासमा टूरगाईडहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ति हजारौ टूरगाईडहरु अहिले बेरोजगार छन् । उनीहरु र उनका परिवारको दैनिकी असहज बन्दै गएको छ । यो असहज अवस्थामा सरकारले अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले हाम्रा जुन मागहरु छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, म आशावादी छु सम्बोधन पक्कै पनि हुन्छ ।